Resaky ny mpitsimpona akotry : fijery ny toe-draharaha mandratra sofina Mihoatran’ny fanompana vari-raraka | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : fijery ny toe-draharaha mandratra sofina Mihoatran’ny fanompana vari-raraka
Tsotra ny fanafohizana ny zava-misy eto amin’ny firenena
amin’ny teny vitsy : mihanaka ny fahantrana, mitombo ny isan’ny mponina latsaka an-katerena, miitatra hatrany ny elanelan’ ny fari-piainan’ny 80% ny vahoaka izay sahirana na tena ory sy ny an’ireo olom-bitsy misitraka ny harena. Araky ny hita sy fantatra dia ny fampianarana ny ankizy ihany no hany ahafahan’ireo tratran’ny fahasomparan’ny anjara anarenana ny vintan’ny zanany. Vavolombelon’izany ireo mpianatra fahiny nisondrotra ara-pahaizana sy ara-pivelomana ary ny sasantsasany aza lasa tompon’andraikitra ambony teo amin’ny fanatanterahana raharaham-pirenena vokatry ny famolavolan’ny sekoli-panjakana azy ireo tany am-piandohana. Asa na nohon’ny fiazakazahan’ny fitombon’ ny mponina an’isa sy ny tsy fahafahan’ny fanjakana am-pihitatra toy izay ny isan’ny sekoly sy ny isan’ny mpampianatra, nikorosy tsikelikely ny fampianarana ao amin’ny sekoli-panjakana. Any amin’ireny sekoly ireny ihany anefa no afaka andefasan’ny 70% ‘ny raiamandreny Malagasy ny zanany.
Tsy diso angamba ny fiheverana mikasika ny fihenan’ ny fanantenana ahafahana ampitombo ny vintana raha ireny sekoly ireny ankehitriny no ianteherana ampisondrotra ny ankizy. Voahozona tsy isondrotra izany ireo 70% izay efa niangaran’ny vintana noho izy teraka tao amin’ny tontolo ianjadin’ny fahantrana ?
Tsapan’ny mpitondra hono izany araky ny filazan’izay nifandimby toerana, izay samy tsy nahovoka avokoa: ny teo aloha tsy niova afa-tsy ny endrika ivelany angamba. Mandainga ny manam-pahefana izay manda an’izany, firy amin’izy ireny no sahy andefa ny zanany na ny zafiny amonjy fianarana any amin’ny EPP ?
Miha loza hatrany, fitaka no amahanana ny mponina, poizina no afafy eto amin’ny firenena, tsy fantatra ny fomba hafa ilazana an’
ity fiantsorohana ny raharaha amina fampidirana mpampianatra Fram ity. Iza no sahy itompo teny fa tsy nietry ny fahaizan’ ireo mpampianatra nomena fiofana maimaika raha ampitahina amin’ny fahaizan’ireo tsara fiomanana tany amin’ny Normale ? Kentrona ve ny vahoaka hiino fa na ampitombona aza ny isan’ny mpampianatra ny fampihenana ny fari-pahaizany dia ampisondrotra fa tsy ampitontona ny fahaizan’ny mpianatra !!! Ny Filohampirenena mihitsy anefa no nidera ny fitondrany nohon’ny fampidirana mpampianatra Fram aman’arivorivony ho mpiasam-panjakana. Fandrika manageja ny firenena izany. Rehefa tsapa ny voka-dratsy ateraky ny tsy fetezan’io tetik’I Rabejofo io, dia taona firy indray no tsy maintsy ampiafina ny zana-bahoaka hiaritra ny maimbo alohan’ny ahafahana ampidirana mpampianatra tsy akandasitra fa tsara ofana ho mpamolavola olom-pirenena vanona ?